Raharaha Alana Cutland Razana efa potika tanteraka no hitan’ireo mpikaroka
Tsy misy taolan-kalevina ! Io no fomba fiteny Malagasy mahakasika ilay tovovavy britanika, Alana Cutland nitsanbikina teny ambony fiaramanidina.
Tonga alina teny Ivato ny sisan-taolany raha ny fampitam-baovaon’ny zandary manoloana ny mpanao gazety, omaly tolakandro. Fe ila, taolandamosina, karandoha nahitana singam-bolo kely sisa hitan’ny zandary sy fokonolona afak’omaly izay nalaina tamin’ny toerana samy hafa, vokatry ny fianjerana avy any amin’ny 1 200 m. Efa vita avokoa ny fanadihadiana rehetra, ny fitiliana ny razana sisa andrasana dia hatolotra ny fitsarana ao Port-Bergé ny raharaha ary avy eo homena ny fianakaviana sy ny ambasady britanika ny antontantaratasy ary ny razana. Tsiahivina fa mpianatra manao fikarohana mikasika ny fozakely ity teratany vahiny ity no niala tao anaty voromby ny 25 jolay maraina teo. Avy any amin’ilay toeram-pizahantany malaza, Anjanjavy amin’iny faritra Boina iny izy sy ny mpizahatany iray ary ny mpanamory raoplanina nikasa hihazo ny renivohitra. Iray andro mialoha io no nifampiresaka tamin’ny ray aman-dreniny izy fa tsy nahomby ny fikarohany ka nankinin’izy ireo tamin’ity mpizahatany anglisy. Nidongy tsy nety nisakafo io mpianatra io ny 24 jolay. Tao anatin’ny alan’i Mahadrodroka, 120 km miala an’i Mahajanga no nilatsahany izay nahitana ny vatany efa niparitaka